Monorepo vs Multi-Repo: Faa'iidooyinka iyo Khasaarooyinka Xeeladaha Kaydka Xeerka | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Monorepo vs Multi-Repo: Faa'iidooyinka iyo Khasaarooyinka Xeeladaha Kaydka Xeerka
Monorepo vs Multi-Repo: Faa'iidooyinka iyo Khasaarooyinka Xeeladaha Kaydka Xeerka
Waxaa jira laba xeeladood oo waaweyn oo loogu talagalay martigelinta iyo maareynta koodhka iyada oo loo marayo Git: monorepo vs multi-repo. Labada habba waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaare.
Waxaan u isticmaali karnaa labada hab ee codebase kasta oo luqad kasta. Waxaad u isticmaali kartaa mid kasta oo ka mid ah xeeladahan mashaariicda ay ku jiraan sacab muggiis oo maktabado ah oo ay kumanaan ka mid yihiin. Xitaa haddii ay ku lug leedahay dhowr xubnood oo koox ah ama boqolaal, ama aad rabto inaad martigeliso koodka gaarka ah ama isha furan, waxaad weli raaci kartaa monorepo ama multi-repo oo ku saleysan arrimo kala duwan.
Waa maxay faa'iidooyinka iyo khasaaraha ee hab kasta? Goorma ayaan isticmaalnaa mid ama mid kale? Aan ogaano!
Waa maxay Repos?
Repo (gaaban oo loogu talagalay kaydinta) waa kaydinta dhammaan isbeddellada iyo faylalka mashruuca, taasoo awood u siinaysa horumariyeyaasha inay "koontaroolaan nooca" hantida mashruuca inta lagu jiro marxaladda horumarinta.
Caadi ahaan waxaanu tixraacnaa kaydka Git (sida ay bixiso GitHub, GitLab, ama Bitbucket), laakiin fikradda sidoo kale waxay khusaysaa nidaamyada kale ee kantaroolka (sida Mercurial).
Waxaa jira laba xeeladood oo waaweyn oo loogu talagalay martigelinta iyo maaraynta codebase-kayaga iyada oo loo marayo Git: habka monorepo iyo habka repo multi. 🚀 Mid walba ku baadh hagahan ⬇️Riix halkan Tweet
Waa maxay Monorepo?
Habka monorepo wuxuu isticmaalaa hal kayd si uu u martigeliyo dhammaan koodka maktabadaha badan ama adeegyada ka kooban mashaariicda shirkadda. Markay ugu sarreyso, dhammaan codebase ka yimid shirkad - oo ku baahsan mashruucyo kala duwan oo lagu calaamadeeyay luqado kala duwan - ayaa lagu martigeliyay hal kayd.
Ku-haynta dhammaan codebase-ka hal kayd waxay ku siinaysaa faa'iidooyinka soo socda.
Waxay hoos u dhigtaa Caqabadaha Soo Gelitaanka
Marka xubnaha cusubi ay bilaabaan inay u shaqeeyaan shirkad, waxay u baahan yihiin inay soo dejiyaan koodka oo ay rakibaan qalabka loo baahan yahay si ay u bilaabaan inay ka shaqeeyaan hawshooda. Ka soo qaad in mashruucu ku kala firirsan yahay meelo badan oo kayd ah, mid walbana uu leeyahay tilmaamihiisa rakibidda iyo qalabayntiisa. Xaaladdaas, habaynta bilowga ahi waxay noqon doontaa mid adag, marar badanna, dukumeentigu ma dhammaystirmi doonaan, waxay u baahan yihiin xubnahan cusub ee kooxda inay la xiriiraan asxaabta si ay u caawiyaan.
monorepo-ku wuxuu fududeeyaa arrimaha. Maadaama ay jirto hal meel oo ka kooban dhammaan koodka iyo dukumentiyada, waxaad hagaajin kartaa habaynta bilowga ah.
Maareynta Koodhka Bartamaha Ku Yaala
Haysashada meel kayd ah waxay siinaysaa muuqalka koodka dhammaan horumariyayaasha. Waxay fududaynaysaa maaraynta koodka maadaama aan isticmaali karno raadraaca hal arrin si aan u daawado dhammaan arrimaha inta lagu jiro wareegga nolosha ee codsiga.
Tusaale ahaan, sifooyinkani waa kuwo qiimo leh marka arrintu gaadho laba (ama ka badan) maktabadaha carruurta oo leh cillad ka jirta maktabadda ku tiirsan. Meelo badan oo kayd ah, waxa laga yaabaa inay adagtahay in la helo qaybta koodka halka ay dhibaatadu ka dhacayso.
Intaa waxaa dheer, waxaan u baahan doonaa inaan ogaano kaydka loo isticmaalo si loo abuuro arrinta ka dibna ku casuunno xubnaha kooxaha kale si ay gacan uga geystaan ​​xallinta dhibaatada.
Iyadoo monorepo ah, si kastaba ha ahaatee, labadaba helitaanka dhibaatooyinka koodka iyo iskaashiga si loo xalliyo dhibaatada ayaa noqda mid fudud in la gaaro.
Codsiga aan Xanuunka Lahayn-Dib-u-habaynta Balaadhan
Marka la abuurayo dib u habaynta koodka arjiga oo dhan, maktabado badan ayaa saameyn doona. Haddii aad ku martigelinayso meelo badan oo kayd ah, maaraynta dhammaan codsiyada jiidashada kala duwan si ay isula jaanqaadaan waxay caddaynaysaa inay caqabad tahay.
monorepo-ku wuxuu fududeeyaa in lagu sameeyo dhammaan wax ka beddelka dhammaan koodka dhammaan maktabadaha oo lagu soo gudbiyo hal codsi.
Aad U Adag In La Jebiyo Shaqada Ku Dhow
monorepo-ka, waxaan u diyaarin karnaa dhammaan imtixaanada dhammaan maktabadaha si ay u shaqeeyaan mar kasta oo hal maktabad wax laga beddelo. Natiijo ahaan, suurtagalnimada in wax laga beddelo maktabadaha qaarkood ayaa hoos u dhigtay saameynta xun ee maktabadaha kale.
Kooxuhu waxay wadaagaan Dhaqanka Horumarinta
In kasta oo aanay suurtogal ahayn, oo leh habka monorepo, waxay noqonaysaa mid adag in la dhiirigaliyo dhaqamo-hoosaadyo gaar ah oo ka dhex jira kooxo kala duwan. Maadaama ay wadaagi doonaan kayd isku mid ah, waxay u badan tahay inay wadaagaan barnaamij isku mid ah iyo hababka maamulka oo ay isticmaalaan qalab horumarineed oo isku mid ah.
Arrimaha Habka Monorepo
Isticmaalka hal kayd dhammaan koodkayaga waxa uu leeyahay cillado badan.
Wareegyada Horumarinta Qunyar socodka
Marka koodka maktabadda uu ka kooban yahay isbeddello jebin ah, kaasoo ka dhigaya imtixaannada maktabadaha ku-tiirsan ay fashilmaan, koodka waa in sidoo kale la hagaajiyaa ka hor inta aan la isku darin isbeddellada.
Haddii maktabadahani ay ku tiirsan yihiin kooxo kale, kuwaas oo ku mashquulsan inay ka shaqeeyaan hawl kale oo aan awoodin (ama diyaar u ah) inay la qabsadaan koodkooda si ay uga fogaadaan isbeddelada jebinta oo ay imtixaanada u gudbaan, horumarinta qaabka cusub ayaa laga yaabaa inay istaagto.
Waxa intaa dheer, mashruucu waxa laga yaabaa inuu si fiican u bilaabo inuu ku hormaro kaliya xawaaraha kooxda ugu hooseysa ee shirkadda. Natiijadani waxay niyad jabin kartaa xubnaha kooxaha ugu dhaqsaha badan, iyaga oo u abuuraya shuruudo ay ku rabaan inay ka tagaan shirkadda.
Intaa waxaa dheer, maktabaddu waxay u baahan doontaa inay qabato imtixaannada dhammaan maktabadaha kale sidoo kale. Tijaabooyin badan oo la ordo, wakhti badan ayay qaadanaysaa in lagu socodsiiyo, taasoo hoos u dhigaysa sida ugu dhakhsaha badan ee aan ugu celcelin karno koodkayaga.
Wuxuu u baahan yahay soo dejinta Codbase-ka oo dhan
Marka monorepo-ku ka kooban yahay dhammaan koodka shirkadda, waxay noqon kartaa mid weyn, oo ka kooban gigabytes oo xog ah. Si ay wax ugu biiriyaan maktabad kasta oo lagu qabto gudaha, qof kasta waxa uu u baahan yahay soo dejinta dhammaan kaydka.
Wax ka qabashada koodbase-ballaadhan waxa ay tusinaysaa isticmaalka liidata ee meel bannaanka wadeyaashayada adag iyo is-dhexgalka gaabinaya ee aan la leenahay. Tusaale ahaan, falalka maalinlaha ah sida fulinta git status ama raadinta codebase ee leh regex waxay qaadan kartaa ilbiriqsiyo badan ama xitaa daqiiqado ka dheer inta ay heli lahaayeen boos celin badan.
Maktabadaha aan la beddelin ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo cusub
Marka aan calaamadeyno monorepo, dhammaan koodka ku jira waxaa loo qoondeeyaa sumadda cusub. Haddii falkani uu kiciyo siideyn cusub, markaas dhammaan maktabadaha lagu hayo kaydka ayaa dhowaan lagu sii dayn doonaa nambarka nooca ee summada, inkastoo qaar badan oo ka mid ah maktabadahaas laga yaabo inaysan wax isbeddel ah yeelan.
Fargeeto ayaa ka sii dhib badan
Mashaariicda isha furan waa inay sida ugu fudud ee suurtogalka ah u fududeeyaan ka qaybqaatayaasha. Meelo badan oo kayd ah, tabaruceyaashu waxay si toos ah u aadi karaan kaydka gaarka ah ee mashruuca ay rabaan inay wax ku biiriyaan. Iyada oo monorepo ay martigelinayso mashaariic kala duwan, in kastoo, ka qaybqaatayaasha waa in ay marka hore u maraan jidkooda mashruuca saxda ah waxayna u baahan doonaan inay fahmaan sida ay wax ku biirintoodu u saamayn karto dhammaan mashaariicda kale.
Waa maxay Multi-Repo?
Habka-repo multi-repo waxay isticmaashaa meelo badan si ay u martigeliso maktabadaha ama adeegyada badan ee mashruuc ay samaysay shirkad. Markay ugu daran tahay, waxay martigelin doontaa nooc kasta oo ugu yar ee kood dib loo isticmaali karo ama shaqaynta goonida ah (sida adeegaha yar yar) ee hoos yimaada kaydkeeda.
Martigelinta maktabad kasta si ka madax bannaan dhammaan kuwa kale waxay ku siinaysaa faa'iidooyin fara badan.
Versioning Madaxbanaan ee Maktabada
Markaad calaamadaynayso kaydka, dhammaan codebase-keeda waxaa loo qoondeeyay sumadda "cusub". Mar haddii koodka maktabad gaar ahi uu yaallo kaydka, maktabadda waa la calaamadayn karaa oo waa la daabacan karaa si ka madax bannaan dhammaan maktabadaha kale ee lagu marti geliyo meelo kale.
Lahaanshaha nooc madax banaan oo maktabad walba ah waxay gacan ka geysataa qeexida geedka ku-tiirsanaanta codsiga, taasoo noo ogolaanaysa inaan habaynno nooca maktabad kasta la isticmaalo.
Siidaynta Adeegga Madaxbanaan
Maadaama kaydka kaliya uu ka kooban yahay koodka adeegga qaar oo aysan jirin wax kale, waxay yeelan kartaa meerto wareeggeeda, oo ka madax bannaan horumar kasta oo laga sameeyay codsiyada gelaya.
Adeeggu wuxuu isticmaali karaa wareegga siideynta degdega ah sida gaarsiinta joogtada ah (halkaas oo kood cusub la geeyo ka dib marka uu gudbo dhammaan imtixaannada). Maktabadaha qaarkood ee hela adeega ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan wareeg siideyn gaabis ah, sida kuwa soo saara siideyn cusub hal mar todobaadkii.
Waxay ka caawisaa Qeexitaanka Xakamaynta Helitaanka ee Ururka oo dhan
Kaliya xubnaha kooxda ku lugta leh horumarinta maktabadda ayaa u baahan in lagu daro kaydka u dhigma oo soo dejiyaan koodka. Natiijadu waxay tahay, waxaa jirta istaraatiijiyad xakamaynta gelitaanka daahsoon ee lakab kasta oo codsiga ku jira. Kuwa ku lug leh maktabadda waxaa la siin doonaa xuquuqaha tafatirka, qof kasta oo kalena ma heli karo kaydka kaydka. Ama waxaa laga yaabaa in la siiyo wax-akhris laakiin aan la siin xuquuqda tafatirka.
Waxay u ogolaataa kooxuhu inay si iskood ah u shaqeeyaan
Xubnaha kooxdu waxay naqshadayn karaan nashqadaynta maktabadda oo ay hirgelin karaan koodkeeda oo ka shaqaynaya dhammaan kooxaha kale. Waxay gaari karaan go'aamo ku saleysan waxa ay maktabaddu qabato ee macnaha guud iyadoo aan saameyn ku yeelan shuruudaha gaarka ah ee koox dibadda ah ama codsi.
Arrimaha leh Habka-Repo Multi-Repo
Isticmaalka meelo badan oo kayd ah waxay dhalin kartaa arrimo dhowr ah.
Maktabadaha waa in si joogto ah dib loo habeeyaa
Marka la soo saaro nooc cusub oo maktabad ah oo ka kooban isbeddello jebin ah, maktabadaha iyadoo ku xiran maktabaddan waxay u baahan doonaan in la habeeyo si loo bilaabo isticmaalka nooca ugu dambeeyay. Haddii wareegga siideynta maktabadda uu ka dhaqso badan yahay ta maktabadaha ku tiirsan, waxay si dhakhso ah isu noqon karaan kuwo isku mid ah.
Kooxuhu waxay u baahan doonaan inay si joogto ah ula qabsadaan si ay u isticmaalaan sii daynihii ugu dambeeyay ee kooxaha kale. Marka la eego in kooxaha kala duwan ay leeyihiin mudnaano kala duwan, tani waxay mararka qaarkood noqon kartaa mid adag in la gaaro.
Sidaa darteed, kooxda aan awoodin inay soo qabtaan waxay ku dhamaan karaan inay ku dhegganaadaan nooca duugoobay ee maktabadda ku tiirsan. Natiijadani waxay saameyn ku yeelan doontaa codsiga (marka la eego amniga, xawaaraha, iyo tixgelinta kale), farqiga u dhexeeya horumarinta maktabadaha ayaa laga yaabaa inuu sii weynaado.
Kooxaha Jajabka May
Marka kooxo kala duwan aysan u baahnayn inay is dhexgalaan, waxaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan siloskooda. Muddada fog, tani waxay keeni kartaa in kooxuhu ay soo saaraan dhaqamadooda hoose ee shirkadda, sida adeegsiga habab kala duwan oo barnaamij ama maarayn ama adeegsiga qalabyo horumarineed oo kala duwan.
Haddii qaar ka mid ah kooxda ay ugu dambeyntii u baahan yihiin inay ka shaqeeyaan koox kale, waxaa laga yaabaa inay la kulmaan xoogaa naxdin dhaqameed oo ay bartaan hab cusub oo ay shaqadooda u qabsadaan.
Monorepo vs Multi-Repo: Farqiga Aasaasiga ah
Labada habba ugu dambeyntii waxay la macaamilaan ujeedo isku mid ah: maaraynta codebase. Sidaa darteed, labadooduba waa inay xalliyaan caqabado isku mid ah, oo ay ku jiraan maaraynta siidaynta, kobcinta wada shaqaynta xubnaha kooxda, arrimaha maaraynta, imtixaanada la wado, iyo kuwa kale.
Kala duwanaanshahooda ugu weyni waxa uu khuseeyaa wakhtiga xubnaha kooxda si ay go'aano u gaadhaan: ha ahaato mid hore u ah monorepo ama hoos u dhaca khadka loogu talagalay multi-repo.
Aan si faahfaahsan u falanqeyno fikradan.
Sababtoo ah dhammaan maktabadaha si madax bannaan ayaa loogu qaabeeyey goobta badan ee repo, kooxda sii daysay maktabadda oo leh isbeddello jabay ayaa si badbaado leh u samayn kara iyaga oo u qoondeynaya nambar nooc cusub oo cusub siideyntii ugu dambeysay. Kooxaha kale waxay heli karaan maktabadahooda ku tiirsan inay ku dhegaan nuqulkii hore oo ay u beddelaan kan cusub marka koodkooda la waafajiyo.
Habkani wuxuu ka tagayaa go'aanka marka la waafajinayo dhammaan maktabadaha kale koox kasta oo mas'uul ah, kuwaas oo samayn kara wakhti kasta. Haddii ay aad u daahdaan oo noocyada cusub ee maktabadda la soo saaro, xidhitaanka farqiga u dhexeeya maktabadaha ayaa noqon doona mid aad u adag.
Sidaa awgeed, iyadoo hal koox ay si degdeg ah oo badiyaa ku celcelin karto koodka, kooxaha kale ayaa laga yaabaa inay caddeeyaan inay awoodi waayaan inay qabtaan, ugu dambayntiina soo saaraan maktabado kala duwan.
Dhanka kale, deegaanka monorepo, ma sii dayn karno nooc cusub oo maktabad ah oo jebiya qaar ka mid ah maktabadaha kale mar haddii imtixaanadooda ay dhici doonaan. Xaaladdan oo kale, kooxda koowaad waa inay la xiriirtaa kooxda labaad si loogu daro isbeddellada.
Ku daalay heerka hoose ee 1 taageerada martigelinta WordPress oo aan jawaabo lahayn? Isku day kooxdayada taageerada heerka-caalamka ah! Eeg qorshayaashayada
Habkani waxa uu kooxaha ku qasbayaa in ay la qabsadaan dhammaan maktabadaha mar kasta oo ay qasab tahay in uu dhaco isbeddel hal maktabad ah. Dhammaan kooxaha waxaa lagu qasbay inay wada hadlaan oo ay si wadajir ah xal u gaaraan.
Natiijo ahaan, kooxda koowaad ma awoodi doonaan inay ku celceliyaan sida ugu dhakhsaha badan ee ay rabaan, laakiin koodka maktabadaha kala duwan marna ma bilaabayo kala duwanaansho.
Marka la soo koobo, habka dib-u-celinta badan ayaa gacan ka geysan kara abuuritaanka dhaqan "dhakhso u dhaq-dhaqaaqa oo wax jebiya" kooxaha dhexdooda, halkaas oo kooxaha madax-banaani ay ku soo saari karaan wax soo saarkooda xawaare. Taa beddelkeeda, habka monorepo wuxuu door bidaa dhaqanka wacyigelinta iyo daryeelka, halkaas oo aan kooxuhu ahayn in laga tago si ay u xalliyaan dhibaatada keligood.
Isku-dhafka Poly-As-Mono Approach
Haddii aynaan go'aansan karin haddii aan isticmaalno hababka multi-repo ama monorepo, waxaa sidoo kale jira habka u dhexeeya: in la isticmaalo meelo badan oo kayd ah oo aad isticmaasho qalab si aad u ilaaliso, taas oo ka dhigaysa mid u eg monorepo laakiin leh dabacsanaan badan.
Meta waa mid ka mid ah aaladahaas. Waxay abaabushaa kaydyo badan oo hoos yimaada hagis-hoosaadyo waxayna bixisaa interface-line interface kaas oo fulinaya amar isku mid ah dhammaantood isku mar.
Kaydka-badan ayaa ka kooban macluumaadka kaydiyayaashu ka samaysan yihiin mashruuc. Ku xidhidaynta kaydkan iyada oo loo marayo meta ayaa markaa si isdaba joog ah u xidhi doonta dhammaan kaydadka loo baahan yahay, taas oo u sahlaysa xubnaha cusub ee kooxda in ay isla markiiba bilaabaan ka shaqaynta mashaariicdooda.
Si loo xidho meta-repository iyo dhammaan meelo badan oo la qeexay, waa inaan fulinaa kuwa soo socda:
Meta waxay fulin doontaa a git clone meel kasta oo kayd ah oo geli galka hoose:
Xiritaanka mashruuc-mashruuc. (Isha sawirka: github.com/mateodelnorte/meta)
Laga bilaabo markaas, fulinta ah meta exec amarku wuxuu fulin doonaa amarka fayl-hoosaad kasta. Tusaale ahaan, fulinta git checkout master kayd kasta waxaa loo sameeyaa sidatan:
Isku-dhafka Mono-As-Poly Approach
Hab kale ayaa ah in lagu maareeyo koodka iyada oo loo marayo monorepo ee horumarinta, laakiin nuqul ka samaynta koodka maktabad kasta oo la galiyo kaydkeeda madax-bannaan ee hawlgelinta.
Istaraatiijiyadani waxay ku badan tahay gudaha nidaamka deegaanka ee PHP sababtoo ah Xidhmada (xakamaynta laxamiistaha ugu weyn) waxay u baahan tahay URL kayd dadweyne si loo daabaco xirmo, suurtagalna ma aha in la tilmaamo in baakadda ay ku dhex taal hage-hoosaadka kaydka.
Marka la eego xaddidaadda Xidhmada, mashaariicda PHP waxay wali u isticmaali karaan monorepo horumarinta, laakiin waa inay u adeegsadaan habka dib-u-celinta badan ee geynta.
Si loo gaaro beddelkan, waxaan ku fulin karnaa qoraal git subtree split Ama isticmaal mid ka mid ah qalabka la heli karo kaas oo fulinaya isla macquulnimada:
GitHub Action ee Monorepo Split
Yaa Isticmaalaya Monorepo vs Multi-Repo
Dhowr shirkadood oo tignoolajiyadeed oo waaweyn ayaa door bida habka monorepo, halka kuwa kale ay go'aansadeen inay isticmaalaan habka repo-ka badan.
Google, Facebook, Twitter, iyo Uber ayaa dhamaantood si cad u dammaanad qaaday habka monorepo. Microsoft waxay waddaa Git monorepo-ka ugu weyn meeraha si ay u martigeliso koodhka isha ee nidaamka hawlgalka Windows.
Dhanka kale, Netflix, Amazon, iyo Lyft waa shirkado caan ah oo isticmaalaya habka dib-u-celinta badan.
Dhinaca isku-dhafka poly-as-mono, Android waxay cusboonaysiisaa meelo badan, kuwaas oo loo maareeyo sida monorepo.
Dhinaca isku-dhafka mono-as-poly, Symfony waxay ku haysaa koodka dhammaan qaybihiisa monorepo. Waxay u kala qaybiyeen bakhaarro madax bannaan oo la geynayo (sida symfony/dependency-injection iyo symfony/event-dispatcher.)
Tusaalooyinka Monorepo iyo Multi-Repo
Koontada WordPress ee GitHub waxay martigelisaa tusaalayaal labadaba monorepo iyo qaabab badan oo repo ah.
Openverse, makiinadda raadinta warbaahinta shatiga furan, waxay martigelisaa qaybaheeda ugu muhiimsan kaydadka madax-bannaan: Front-end, Catalog, iyo API.
Monorepo vs Multi-Repo: Sidee loo doortaa?
Sida dhibaatooyin badan oo horumarineed, ma jirto jawaab hore loo sii qeexay oo ku saabsan habka aad u isticmaali karto. Shirkado iyo mashruucyo kala duwan ayaa ka faa'iidaysan doona hal ama mid kale iyadoo lagu saleynayo xaaladahooda gaarka ah, sida:
Intee buu le'eg yahay codebase? Miyuu ka kooban yahay gigabytes oo xog ah?
Immisa qof ayaa ka shaqayn doona codebase? Ma ku dhawaad ​​10, 100, ama 1,000?
Immisa xirmo ayaa jiri doona? Ma ku dhawaad ​​10, 100, ama 1,000?
Immisa xirmo ayay kooxdu u baahan tahay inay ku shaqeyso wakhti go'an?
Sidee si adag ugu xidhan yihiin xidhmooyinka?
Ma ku lug leeyihiin luuqado barnaamijyo kala duwan? Ma u baahan yihiin software gaar ah oo lagu rakibay ama qalab gaar ah si uu u shaqeeyo?
Immisa qalab geyn ayaa loo baahan yahay, iyo intee in le'eg ayay u adag yihiin in la dejiyo?
Waa maxay dhaqanka shirkadda? Kooxaha ma lagu dhiirigeliyaa inay iskaashi sameeyaan?
Waa maxay agabka iyo farsamada ay kooxuhu yaqaanaan sida loo isticmaalo?
Habka ay tahay in aad u qaadato codebase? 🤔 Wax badan ka baro halkan 👇Riix halkan Tweet
Waxaa jira laba xeeladood oo waaweyn oo loogu talagalay martigelinta iyo maareynta koodhka: monorepo vs multi-repo. Habka monorepo wuxuu ka kooban yahay kaydinta koodka maktabadaha ama mashaariicda kala duwan - iyo xitaa dhammaan koodka shirkad - hal meel oo kayd ah. Iyo nidaamka repo multi-repo wuxuu u qaybiyaa koodka unug, sida maktabado ama adeegyo, wuxuuna ku xafidaa koodkooda kaydka madaxa banaan.
Habka loo isticmaalo waxay ku xiran tahay shuruudo badan. Labada xeeladoodba waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido darrooyin dhowr ah, waxaanan dhammaantood si faahfaahsan ugu soo koobnay maqaalkan.
Miyaad qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan monorepos ama multi-repos? Noogu sheeg qaybta faallooyinka!
Waa maxay buundada ku qanacsanaanta macmiilka (CSAT)? Maxayse Muhiim u tahay?
Sida Loo Codsado Suuqgeynta Gudaha WordPress